Iyini Uhlelo Lwenyanga Yonke Yonyaka Elula Kakhulu?
Ukusesha injini yokusebenza (noma i-SEO) akuyona umcimbi owodwa, kodwa inqubo eqhubekayo edinga ukuqapha nokuguqula njalo. Kungakhathaliseki ukuthi uyayithanda noma cha, izinjini zokusesha zishintsha njalo izilungiswa zabo. I-Google, isibonelo, ukuhlanza njalo amasu ayo ukuze unikeze imiphumela ewusizo kakhulu kubasesho.
Ngakho-ke, ngisho nalabo abanikazi bamabhizinisi asebevele baqalise amawebhusayithi abo banemisebenzi ehlobene ne-SEO ukwenza njalo. Khumbula, ukugcina isayithi lakho lisesikhathini futhi lihlelwe kakhulu yi-Google kufanele wenze umsebenzi wezinhlelo zokugcinwa kwe-SEO ngenyanga ngayinye. Yilapho uhlelo lwe-SEO lwenyanga lufika - no support linux vps ddos.
Namuhla, sizokwethula zonke izimfihlo zokugcina imithombo yakho ehle kahle kahle impumelelo eqhubekayo ngezinga lakho lokusesha injini. Ukulungele? Ake siqale.
Uhlelo lwakho lwangasese lwe-SEO Monthly Plan
Esinye sezizathu eziyinhloko zokuthi kungani kufanele ugcine imithombo yakho kusesikhathini ngoba isayithi lakho libizwa ngokuthi yi-advertising medium yebhizinisi lakho elinamandla ukuthatha nokubheka inani labantu abaningi. Nazi amathiphu alula okumele uwalandele ukusiza iwebhusayithi yakho ihlale ngaphambi komdlalo.
Amagama angukhiye amasha ahlose
Kufanele uhlose amagama angukhiye amasha inyanga ngayinye. Okokuqala, funa igama elingukhiye lokuncintisana elincane elithola okungaphezulu kuka-500 ukusesha ngenyanga. Bese, uhlose ukuthi igama elingukhiye kokuqukethwe oyakhayo kule nyanga. Ochwepheshe be-Semalt batusa ukuthi usebenzise ithuluzi legama lekhiye le-Google Adwords ukuze uthole amagama angukhiye afanelekayo. Futhi, ungakhohlwa ukuchofoza "okuqondile" ukuze unciphise imiphumela phansi. Simple njengoba lokho.
Ukukhiqiza Okuqukethwe Okusheshayo Nenani Eliyigugu
Ngokushesha lapho usuqumile "amagama akho angukhiye enyangeni," isinyathelo esilandelayo ukudala okuqukethwe okubhekiswe kulawa magama angukhiye. Asikho isidingo sokukhathazeka uma ungenayo isikhathi esanele sokudala okuningi okuqukethwe okusha enyangeni enikeziwe - ungahlala uqasha ama-freelancers noma abanikazi be-copywriter abazokwenza lokho msebenzi kuwe. Enye indlela yokuphuma kweso simo ukukhetha ikhasi elikhona lekhophi efanele futhi ulihlele ukufaka lelo gama elingukhiye kokuqukethwe. Noma kunjalo, uma ungakwazi ukukhiqiza okuqukethwe okusha njalo, kungcono ukwenza kanjalo: bhala izihloko ezintsha, okuthunyelwe kwebhulogi, amaphepha amhlophe, izifundo ze-case, amabhulogi wezivakashi noma okunye okuqukethwe okuzoletha enye ithrafikhi kanye nesigaba esiphezulu segama elingukhiye.
Nikeza i-Multimedia ithuba
Awukathumeli noma yimaphi amavidiyo achazayo noma ama-podcast? Uma kungenjalo, kungcono ukuthi uqale umkhuba onjalo ngokushesha ngangokunokwenzeka. Dala ividiyo eyodwa yangokwezifiso inyanga ngayinye. Uma ubhala iskriphthi sevidyo, qinisekisa ukuthi kufaka kokubili amagama angukhiye amasha nekhona. Ngokufanayo njengama-athikili, qiniseka ukwenza okuqukethwe kwevidiyo kufanele futhi kujabulise umbukeli - sebenzisa izenzakalo zamanje, iziqondiso ngezinyathelo, ukubuyekezwa namanye amaqhinga athandwayo owaziyo azothola izilaleli zakho ezibhekiswe kuzo. Isiphetho
Iqiniso liwukuthi i-intanethi ishintsha njalo futhi iguquke - ngakho-ke imithombo yakho kufanele, futhi. Ukunamathela kumathiphu we-SEO okukhulunywe ngenhla kuzokufundisa okuningi ngokuthi yiluphi uhlobo lokuqukethwe olusebenza kangcono kuwebhusayithi yakho. Sebenzisa lolo lwazi ukuthuthukisa okuqukethwe okukhona ongathanda ukubona ukuphakama emigqeni yamagama angukhiye. Ukunamathela kuhlelo olulandelayo lwe-SEO luzosiza ukugcina okuqukethwe kwakho kuhlanzekile futhi kufakwe kakhulu lapho kukhuliswa ukusebenzisana komsebenzisi newebhusayithi yakho.